1aviagem.com - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, အင်တာဗျူး, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်အပျော်တမ်းပြောပြတယ်ပုံပြင်တွေ
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်အပျော်တမ်းပြောပြတယ်သိကောင်းစရာများ, အင်တာဗျူး, ပုံပြင်များ
ကော်စတာရီကာ၊ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်သောနိုင်ငံ Ah ကော့စတာရီကာ၊ ငါ့ရဲ့ပထမဆုံးခရီးမှာမျှော်လင့်ချက်ထက်ငါ့ကိုအံ့သြစေခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံ ပြီးတော့သူတို့ကဘာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်ခဲ့သလဲ။ ငါမင်းကိုအခုပြောပြမယ်။ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းခရီးသွားတာဘယ်လိုလဲ။ ကော်စတာရီကာအကြောင်းမပြောခင် ...
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ၅ နာရီလက်ဖက်ရည်မြေနှင့်နောက်ကျမည့်နေရာမဟုတ်ပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုညနေ ၅း၀၀ ကျော်ကြားသောဗြိတိန်နိုင်ငံအကြောင်းပြောပါမည်။ နောက်ကျလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဗြိတိန်သို့ပထမဆုံးခရီးစဉ် Heathrow အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှလန်ဒန်သို့ရောက်သောအခါခရီးသွား for ည့်သည်အတွက်အလွန်ကောင်းသည့်အရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ လေဆိပ်ကိုမြေအောက်ရထားနဲ့ဆက်သွယ်ထားသည်။ ဘယ်မှာလဲ
ဆက်ဖတ်ရန် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ၅ နာရီလက်ဖက်ရည်မြေနှင့်နောက်ကျမည့်နေရာမဟုတ်ပါ။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ - ရုပ်ပြစာဖတ်ခြင်းနှင့်ဘီယာသောက်ခြင်းနှင့်ချောကလက်စားခြင်းများပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်
ဒီနေ့မှာတော့ကာတွန်း၊ ဘီယာနဲ့ချောကလက်တွေအကြောင်းသိထားတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်။ ငါစာဖတ်ခြင်းသည်မွေ့လျော်ဖွယ်မျှော်လင့်ပါတယ်! နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအံ့သြစရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ Antwerp - စိန်၏မြို့တော်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးနေရာ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ရထားကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ - ရုပ်ပြစာဖတ်ခြင်းနှင့်ဘီယာသောက်ခြင်းနှင့်ချောကလက်စားခြင်းများပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်
သင့်မိခင်သည်နိုဘယ်လ်ဆုမည်မျှရထိုက်သနည်း။ ပိုလန်နှင့်ပြင်သစ်တို့ကူရီမိသားစုတွင်အနည်းဆုံး ၂ ယောက်တည်ထောင်ခဲ့သည်
ဒီအမေနေ့မှာကျွန်တော်မေးချင်တာက - မင်းအမေကနိုဗယ်ဆုဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲ။ ငါအသက်ဆုလက်ဆောင်ကိုပေးရုံနဲ့သူမထိုက်တန်တယ်၊ နောက်တစ်ယောက်ကသတ္တိရှိပြီးကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်လျှောက်သွားတဲ့အထိငါတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ထင်တယ်။ ကောင်းပြီ, Curie မိသားစုအနည်းဆုံး2တည်ထောင်ခဲ့သည် ...
ဆက်ဖတ်ရန် သင့်မိခင်သည်နိုဘယ်လ်ဆုမည်မျှရထိုက်သနည်း။ ပိုလန်နှင့်ပြင်သစ်တို့ကူရီမိသားစုတွင်အနည်းဆုံး ၂ ယောက်တည်ထောင်ခဲ့သည်
ဘာကြောင့်ဘရာဇီးလ်ကုမ္ပဏီများသည် ESG - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအုပ်ချုပ်မှုသဘောတရားနှင့်၎င်းအားလူတိုင်းအတွက်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ကိုလိုက်နာသင့်သည်။
ESG ဆိုတာဘာလဲ။ ESG အယူအဆသည်ပတ် ၀ န်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုသုံးခုအကြားမျှတမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမေးခွန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့ပုံဖော်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြပါမည် - ပတ် ၀ န်းကျင် - ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ သယံဇာတ၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ လူမှုရေး။ လူမှုရေးစံသတ်မှတ်ချက်အရလူ့အရင်းအနှီး၊ လူမှုရေးအခွင့်အလမ်းများ၊
ဆက်ဖတ်ရန် ဘာကြောင့်ဘရာဇီးလ်ကုမ္ပဏီများသည် ESG - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအုပ်ချုပ်မှုသဘောတရားနှင့်၎င်းအားလူတိုင်းအတွက်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ကိုလိုက်နာသင့်သည်။
သြစတြီးယားသို့ပထမဆုံးခရီးစဉ် - ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေသည့်နိုင်ငံ - ဗီယင်နာ
ဘလော့ဂ်ကို update လုပ်ရန် (COVID-19 ကြောင့်) quarantine ၏အားသာချက်ကိုရယူခြင်း။ အကယ်၍ သင်ထွက်သွားပါကမျက်နှာဖုံး ၀ တ်ဆင်ပါ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကျန်းမာရေးစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါကသတိရပါ။ အဲဒီလိုပြောပြီးသြစတြီးယားကိုကျွန်တော်တို့သွားလည်မှာလား။ သိလိုစိတ်ကိုသတိရသင့်သည်။ ပထမဆုံးသြစတြီးယားတွင်အဓိကဘာသာစကားမှာဂျာမန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရပ်ပါ
ဆက်ဖတ်ရန် သြစတြီးယားသို့ပထမဆုံးခရီးစဉ် - ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေသည့်နိုင်ငံ - ဗီယင်နာ
နှင့် quarantine ၏အားသာချက်ကိုယူပြီး, ရဲ့ဒီ blog အနည်းငယ်ပိုပြီး update လုပ်ကြကုန်အံ့။ ကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုကတော့အဲဒီအယ်လ်ဘမ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်“ အနာဂတ်သို့ခရီးသွားခြင်း” နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစကြ ၀ universeာသို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီနေ့မှာဘာသာရပ်အားလုံးနီးပါးကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဟော်လန်အကြောင်းပြောကြမယ်။ ဟော်လန်သည် ...
ဆက်ဖတ်ရန် နယ်သာလန်? ဟော်လန်၏မြင့်မားသောစံနှင့်မတူကွဲပြားမှု
ပထမ ဦး ဆုံးလစ်သူယေးနီးယား - Vilnius - သူငယ်ချင်းကောင်းများကိုတွေ့ခြင်း
ငါ့ကိုအဘယ်အရာကအထင်ကြီးစေခဲ့သနည်း သူမကိုယ်ဝန်ပင်ဘရာဇီးလ်သူငယ်ချင်းဟောင်းကိုပြန်တွေ့ရန်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးရောက်ရှိလာသောဘယ်လာရုစ်မှသူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်သည်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူမလက်ဆောင်အများကြီးယူနေတုန်းပဲ။ Minsk မှ pin နှင့်ပို့စကတ်နှင့်ဘီလာရုစ်အရုပ်အချို့သည်ကံအတွက်ဖြစ်သည်။ (အိုးနှင့် cookies များကိုလည်း…
ဆက်ဖတ်ရန် ပထမ ဦး ဆုံးလစ်သူယေးနီးယား - Vilnius - သူငယ်ချင်းကောင်းများကိုတွေ့ခြင်း
ဘာကြောင့်ပရာ့ဂ်သည်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သနည်း။ - ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်သည်ဘရာဇီးလ်ပြက္ခဒိန်၏တရားဝင်အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သေးသော်လည်းကမ္ဘာ၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်ကျင်းပသောဟယ်လိုဝိန်းပွဲတော်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ ဒီမှာဘရာဇီးမှာနို ၀ င်ဘာ ၂ ရက်၊ အားလပ်ရက်နဲ့လူသေတွေရဲ့နေ့တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ...
ဆက်ဖတ်ရန် ဘာကြောင့်ပရာ့ဂ်သည်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သနည်း။ - ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ Mayans နှင့် Aztecs တို့ကဘာသင်ပေးသနည်း။ - မက္ကဆီကို
ရာစုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက်၌ပင်မေယာနှင့်အဇက်တီများကကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာသင်ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ သမိုင်းကိုအနည်းငယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှားတွေကိုမလုပ်မိအောင်သင်ယူနိုင်တယ်။ ဥရောပသားတွေကဘာကြောင့်အမေရိကကိုလွှမ်းမိုးတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ သင်ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုပါက၎င်းသည် ...
ဆက်ဖတ်ရန် ကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ Mayans နှင့် Aztecs တို့ကဘာသင်ပေးသနည်း။ - မက္ကဆီကို
စန်တာ၏မြေသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အေးသနည်း။ - ဖင်လန် - ဟယ်လ်စင်ကီ
ခရစ်စမတ်မတိုင်မီအနည်းငယ်ရှိသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စန်တာကလော့စ်၏မြေယာနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားခြင်းကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီတော့ဒီစွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့အထောက်အပံ့ပေးတဲ့လူတွေအကြောင်းနည်းနည်းလောက်ပြောကြရအောင်။ ငါဖင်လန်ကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့တာလဲ ငါ့ရဲ့ပထမဆုံး…
ဆက်ဖတ်ရန် စန်တာ၏မြေသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အေးသနည်း။ - ဖင်လန် - ဟယ်လ်စင်ကီ
ကာတာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ဘယ်လိုပျံသန်းမလဲ သင်၏ဘ ၀ ၌ပေါ်ပေါက်လာပြီးထပ်ခါထပ်ခါမဖြစ်နိုင်သည့်ထိုအခွင့်အလမ်းကိုသင်သိပါသလား။ ဒါမှန်ပါတယ်၊ ဒီဟာ Qatar Airways နဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်ပဲ။ အဆိုပါဇာတ်ညွှန်းသည်အာရှအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်လည်းအင်အားကြီးမားမှုကြောင့်လေကြောင်းပြီးစီးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဥရုဂွေးတောင်အမေရိကမဟုတ်သောနိုင်ငံ - Montevideo
ဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်အခမဲ့အချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး, ငါဟောင်းခရီးစဉ်ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ... ငါငါစိတ်ကူးထက်ဘလော့ဂ်ကို update လုပ်ဖို့ပိုပစ္စည်းများရှိသည်သတိပြုမိသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါဥရုဂွေးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်။ တောင်အမေရိကနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သူတို့ရဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတွင်း…
ဆက်ဖတ်ရန် ဥရုဂွေးတောင်အမေရိကမဟုတ်သောနိုင်ငံ - Montevideo
ဘရာဇီးနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖလှယ်မှုအတွေ့အကြုံသည်မည်သို့ရှိသနည်း။ - Firenze - အီတလီ
ဖလှယ်မှုအတွေ့အကြုံကဘယ်လိုလဲ။ ဒီနေ့နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကဘာလဲဆိုတာသင်နည်းနည်းယူလာမယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ငါ Thereza ရဲ့အကူအညီအပေါ်အားကိုးပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ၊ သူမ Brasilia ကိုရောက်တော့သူ့အစ်မရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်။ သူမသည်“ နယ်နိမိတ်မရှိသောသိပ္ပံမရှိသော” အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး…
ဆက်ဖတ်ရန် ဘရာဇီးနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖလှယ်မှုအတွေ့အကြုံသည်မည်သို့ရှိသနည်း။ - Firenze - အီတလီ
Left vs. Right Ideology၊ ဘယ်ဘက်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာလဲ။
မကြာသေးမီကဘရာဇီးတွင် `လက်ဝဲဘက် think ဟုထင်သောလူများနှင့်ပိုမိုမှန်ကန်သောလမ်းဖြင့်တွေးသောလူများအကြားအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာစစ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဝေါဟာရများကိုအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ကျွန်တော်တို့မစတင်ခင်ဒီဝေါဟာရများဘယ်ကလာသလဲကြည့်ရအောင်။ ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်၏မူလအစ။
ဆက်ဖတ်ရန် Left vs. Right Ideology၊ ဘယ်ဘက်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာလဲ။
Ciudad Del Este ရှိစျေး ၀ ယ်ခြင်းကထိုက်တန်ပါသလား။ - ပါရာဂွေး
အင်းလူတို့၊ ငါတို့ quarantine ရောက်နေသောကြောင့်ဓာတ်ပုံဟောင်းအချို့ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့အလယ်တွင်ပါရာဂွေးသို့ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးခရီးစဉ်အချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါငါထင်, wow, သူတို့ကပါရာဂွေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းစကားပြော, အဘယ်ကြောင့်ငါကအကြောင်းနည်းနည်းစကားပြောလိမ့်မည်မဟုတ်လော ဒီမှာရလဒ်ပါ။ ဘယ်မှာလဲ? ပါရာဂွေးသည်တောင်အမေရိကရှိ ...
ဆက်ဖတ်ရန် Ciudad Del Este ရှိစျေး ၀ ယ်ခြင်းကထိုက်တန်ပါသလား။ - ပါရာဂွေး
Outburst - Brasilia - ဘရာဇီး
၂၀၁၀-၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၁၁.၁၁၄) ဦး သေဆုံးပြီး (ထ) လာသည်။ ဤသည်မှာ COVID-10.114 ကြောင့်သာဖြစ်သည်။ သားကောင်မျဉ်းကွေးအထွတ်အထိပ်ကိုမြင်လိုသူများအတွက်အလုံအလောက်တက်ခဲ့သလား စီးပွားရေးကိုအသေကောင်များနဲ့ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏ပုံရိပ်ကိုသေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လိုပါကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသင်မည်သို့ဆွဲဆောင်မည်နည်း။ သူတို့ ...
ဆက်ဖတ်ရန် Outburst - Brasilia - ဘရာဇီး
Bariloche - အာဂျင်တီးနားအတွက် ၃ ရက်ကြာခရီးစဉ်
Bariloche - အာဂျင်တီးနားအတွက် ၃ ရက်ကြာခရီးစဉ်ဒီအချိန်မှာတော့ quarantine ကိုအယ်လ်ဘမ်အဟောင်းကိုယူပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းထက်ပိုကောင်းတယ်။ ဘယ်ဟာကအာဂျင်တီးနားမှာရှိတဲ့ဘာရီလိုကိုကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးခရီးကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ ငါမြို့မှာသာသုံးရက်နေ။ , ဘူတာရုံနှစ်ခုဖမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ နေနှင့်ဆီးနှင်း။ AND ...
ဆက်ဖတ်ရန် Bariloche - အာဂျင်တီးနားအတွက် ၃ ရက်ကြာခရီးစဉ်
မေယာနှင့်ကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုခန့်မှန်းခြင်း - မက္ကဆီကို
ကမ္ဘာ၏အဆုံးနှင့် ပတ်သက်၍ မေယန်းတို့အဘယ်အရာသင်ပေးနိုင်သနည်း။ လွန်ခဲ့သောအချိန်က ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လူများစွာသည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားသိခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်မာယာယဉ်ကျေးမှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများများပြားလာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မာယာပြက္ခဒိန်အရကမ္ဘာကြီးသည်နိဂုံးချုပ်မည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန် မေယာနှင့်ကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုခန့်မှန်းခြင်း - မက္ကဆီကို
Pilanesberg Park - ဓာတ်ပုံပညာ Safari နှင့်တိရစ္ဆာန်များသင်ခန်းစာ - တောင်အာဖရိက
ဒီပို့စ်ကတောင်အာဖရိကကိုပထမ ဦး ဆုံးသွားတုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိမ့်မယ် Kruger Park အကြောင်းသိကောင်းစရာများတောင်အာဖရိကကိုသွားဖို့စဉ်းစားသူဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာရောက်နေသူတွေအများကြီးထင်တယ် ဓာတ်ပုံပြပွဲဂိမ်း drive ကို Safari လုပ်ဖို့။ THE ...
ဆက်ဖတ်ရန် Pilanesberg Park - ဓာတ်ပုံပညာ Safari နှင့်တိရစ္ဆာန်များသင်ခန်းစာ - တောင်အာဖရိက
မက္ကဆီကိုအမျိုးသမီးကိုလူတွေ့မေးမြန်းပြီးမက္ကဆီကိုမှာ Coronavirus အကြံပြုချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများယူဆောင်လာခဲ့တယ်
မက္ကဆီကိုအမျိုးသမီးကိုလူတွေ့မေးမြန်းပြီး Corona ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံပြုချက်များနှင့်မက္ကဆီကိုအကြောင်းသိကောင်းစရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ယူလာခဲ့သည်။ ရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ရှိညစာစားပွဲ၌Érikaနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူကငါတို့ခရီးစဉ်အုပ်စုထဲမှာပါ ၀ င်ခဲ့တယ်။ Érikaငါတို့စားပွဲပေါ်မှာဘယ်လောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်စပ်စုခဲ့သည်။ ငါတို့မှာလူတွေရှိတယ် ...
ဆက်ဖတ်ရန် မက္ကဆီကိုအမျိုးသမီးကိုလူတွေ့မေးမြန်းပြီးမက္ကဆီကိုမှာ Coronavirus အကြံပြုချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများယူဆောင်လာခဲ့တယ်
အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ - အက်စ်တိုးနီးယား - Tallinn
အက်စတိုးနီးယား၏မြို့တော်Талလင်သို့ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်သောအခါထူးခြားသောလေဆိပ်တစ်ခုမှအံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူကကြည့်ရတာသူဟာအအေးဆုံးနဲ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါ။ ကျွန်ုပ်ခရီးသွားနေစဉ်လေဆိပ်အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းဝန်ခံသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ - အက်စ်တိုးနီးယား - Tallinn
Gaborone ဆွဲဆောင်မှု - ဘော့ဆွာနာ
ဘာဘရာနာ - Gaborone မှာဘာလုပ်ရမလဲအာဖရိကကိုပထမဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတောင်အာဖရိကနဲ့ဘော့စ်ဝါနားကြားကနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ဘရာဇီးသည်အာဖရိကတိုက်နှင့်အနည်းငယ်ကွာဝေးသည်။ ဒါကြောင့်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးဘော့ဆွာနာကိုကြည့်လားကြည့်ရတာကောင်းတယ်။
ဆက်ဖတ်ရန် Gaborone ဆွဲဆောင်မှု - ဘော့ဆွာနာ
ဆက်ဖတ်ရန် တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုငါတို့ဘယ်လိုနိုင်နိုင်မလဲ။ အဖြေကသင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်
တောင်အာဖရိက။ တောင်အာဖရိကနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။ ထိုအခါအင်တာဗျူး၏အလယ်၌မမျှော်လင့်ဘဲပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။
ငါမစခင်ဒီအင်တာဗျူးကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလို့ငါပြောရမယ်။ ကျနော်တို့မှာဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုစဉ်းစားဖို့အချိန်မရှိဘူး။ အဲဒါကို willpower နဲ့ပဲလုပ်ထားတာ။ Lexiegh ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်မှာ။ သူမသည်စစ်မှန်သောအရာတစ်ခုခုချင်တယ်! ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာဆဲလ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်…ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန် တောင်အာဖရိက။ တောင်အာဖရိကနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။ ထိုအခါအင်တာဗျူး၏အလယ်၌မမျှော်လင့်ဘဲပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။
Knights Templar ရှိခဲ့သလား။
ဆက်ဖတ်ရန် Knights Templar ရှိခဲ့သလား။
ရီဂါမှာဘာသွားလည်မလဲ အသစ်နှင့်အဟောင်းဗိသုကာစည်းလုံးသောမြို့တော် - လတ်ဗီးယား
ငါရီဂါအကြောင်းမပြောခင်ဘာကြောင့်ငါအဲဒီမှာရောက်နေရတာလဲ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအားလုံးသို့ (အနည်းဆုံးသူတို့အများစု) သို့လာရောက်လည်ပတ်လိုပါကလတ်ဗီးယားသည်လမ်းအလယ်တွင်ရှိပြီးလမ်းအလယ်တွင်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်လစ်သူရေးနီးယားကြားတွင်။
ဆက်ဖတ်ရန် ရီဂါမှာဘာသွားလည်မလဲ အသစ်နှင့်အဟောင်းဗိသုကာစည်းလုံးသောမြို့တော် - လတ်ဗီးယား
1- ဘာကြောင့်ငါ Banco Inter ကိုအကြံပြုသလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာဘရာဇီးမှာနေလို့လား၊ အလုပ်ကြောင့်လား၊ လေ့လာဖို့လာတာလား၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ဘရာဇီးအတွက်ချက်လက်မှတ်ဖွင့်ဖို့လိုနေရင်လား။ အကြံပြုချက်က ...
ဆက်ဖတ်ရန် Inter Bank
လူဇင်ဘတ် - ကမ္ဘာ၏နောက်ဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်ခြင်း
လူဇင်ဘတ်သည်ဥရောပရှိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြင်သစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ဂျာမနီတို့ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်လည်ပတ်ရန်ကျိုးနပ်သနည်း။ သူသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနောက်ဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းမေးကောင်းမေးနိုင်တယ်။ Grand Duchy ကဘာလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဖြေ - ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်သမ္မတအစားဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန် လူဇင်ဘတ် - ကမ္ဘာ၏နောက်ဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်ခြင်း
ပြီးခဲ့သည့်ပို့စ်တွင်ကတိပြုထားသကဲ့သို့ငါရှစ်တိုက်ကြီးအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။ ပြီးတော့အcontin္ဌမတိုက်ကဘယ်မှာလဲ။ ငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတယ် အာကာသအတွင်း, ကမ္ဘာမြေပတ်လမ်းအတွက်! ဘရာဇီးလ်တစ်ခုလုံး၏မီးအရွယ်အစားကိုသိရှိရန်ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များကိုရှာဖွေခြင်း။ ဒါကအဓိကဘရာဇီး bijomes ၆ ခုအပါအဝင် ...
ကျွန်ုပ်တို့ပြောလိုသည်မှာကမ္ဘာကြီးသည်သတ္တမမြောက်တိုက်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းကကြည့်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိပင်လယ်ရေစီးများသယ်ဆောင်လာသည့်အမှိုက်သရိုက်များသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတို့အကြားပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲရှိအချက်အချာကျသောနေရာတွင်တည်ရှိသည်။
ဘာစီလိုနာသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဗိသုကာကြိုက်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါခရီးသွား sp ည့်သည်များ၏မျက်နှာစာများနှင့်အတွင်းပိုင်းသည်မည်သည့် or ည့်သည်ကိုမဆိုထူးခြား။ ရင်ပြင်အတွေ့အကြုံမှဆောင်ကျဉ်းပေးသည်။ အကယ်၍ ဤသည်ဘာစီလိုနာသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်လျှင်ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ၁- ဘာသာစကား။ သင်သတိပြုမိသောအရာ ...
Notre Dame မှတစ်ဦးကအခွန်ဆက်
ဒီ post ကိုဘယ်လိုစရမလဲမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်သူ့အတွေးကဘာလဲဆိုတာငါပြောပြမယ်။ 15ပြီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် Notre-Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူအများအပြားကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပြင်သစ်သို့ခရီးသွားခဲ့သူငါ့အဘို့ ...
ဆက်ဖတ်ရန် Notre Dame မှတစ်ဦးကအခွန်ဆက်
ယခင်ပို့စ်တွင်ကတိပြုထားသည့်အတိုင်းနောက်တစ်ခေါက်ပါရီအကြောင်းပြောရန်ငါလာသောအခါသင့်အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးလိမ့်မည်။ (ဒီကတိကိုငါပေးတဲ့နေရာကဒီတစ်ခုပါ။ ) ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုကတိတည်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကသင်၏စမှတ်ကိုသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ယခင်ပို့စ်တွင်ပီရူးနှင့် ပတ်သက်၍ ပီရူးအမျိုးသမီးတစ် ဦး၊ ဘရာဇီးခရီးသွား with ည့်သည်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ (သင်ဤကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤကြီးစွာသောအင်တာဗျူးကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်) ။ သူ့ကြောင့်ငါပီရူးကိုကာကိုလာလက်ဖက်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိချင်စိတ်တစ်ခုယူလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုကာကိုလာပထမ ဦး ဆုံးသိချင်စိတ်ကကိုကာကိုလာလက်ဖက်ရည်သောက်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာစကားများအကြောင်းပြောဆိုကြမည်၊ ပြင်သစ်တို့ကသူတို့နှင့်သူတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောအခါသူတို့၏နှာခေါင်းများကိုအဘယ်ကြောင့်တွန့်ဆုတ်နေသည်။ ကောင်းပြီ၊ ငါနှင့်ပြင်သစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောသောလူအားလုံးနီးပါးကအမြဲတမ်းနှစ်ချက်ပြောခဲ့သည်မှာလှပ။ အံ့သြစရာကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်တို့ကမင်းတို့နှာခေါင်းကိုတွန့်လိမ့်မယ် ...
အီးမေးလ်ကနေ Blog သို့ Subscribe
အားဖြင့် Pro ကို Theme ဒီဇိုင်း
အတူသွား Facebook က
လုပ်နည်းလုပ်နည်းကို ကျွမ်းကျင်သူတွေပဲသိတဲ့ ဒီကလစ်ဟာ... ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီနေ့တော့မဟုတ်ပါဘူး... Hahaha ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @alexshima001
@stellarcs သည် ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၎င်းကို ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သည်။
ဤ blog စာရင်းသွင်းရန်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်နဲ့အီးမေးလ်ကနေပို့စ်အသစ်အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိသည်။
240 သည်အခြား subscriber များအား join